Tag: heerka beddelashada | Martech Zone
Tag: heerka beddelaadda
5 Tusaalooyin ka bixista-Ujeeddada-Fog ee hagaajin doona Heerarkaaga Beddelka
Haddii aad ganacsi leedahay, waad ogtahay in soo bandhigida habab cusub oo wax ku ool ah oo lagu hagaajinayo heerarka beddelashada ay tahay mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan. Waxaa laga yaabaa inaadan u arkin sidaas marka hore, laakiin ka bixitaanka-ujeedka pop-up wuxuu noqon karaa xalka saxda ah ee aad raadineyso. Maxay sidaa u tahay iyo sida ay tahay inaad ugu adeegsato horuumarintaada, waxaad ku ogaan doontaa ilbiriqsi gudahood. Maxay Tahay Ka Bixitaan Ku Talo-Qaadasho Ah? Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan
Wax soo saarka fiidiyowgu waa mid ka mid ah xeeladaha suuqgeynta ee inta badan ka hooseeya qiimeynta markay tahay ROI. Fiidiyow soo jiidasho leh ayaa ku siin kara awood iyo daacadnimo bini'aadamnimadaada astaan ​​u noqota oo rajadaada ku riixda go'aanka wax iibsiga. Waa kuwan qaar ka mid ah tirakoobyada cajiibka ah ee la xiriira fiidiyowga: Fiidiyowyada ku jira websaydhkaaga waxay sababi karaan 80% koror ah heerarka beddelashada Emails-ka ay ku jiraan fiidiyowga ayaa leh boqolkiiba 96% guji-ka-sarreeya marka loo barbardhigo e-mayllada fiidiyowga ee fiidiyowga ah